Te hivezivezy any ivelany ny kanadiana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Te hivezivezy any ivelany ny kanadiana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Septambra 27, 2021
Ny fanadihadiana vaovao dia mahita fa mangetaheta fitsangatsangana any ivelany ny Kanadiana, miaraka amin'ny 87 isan-jato mitatitra ny fitsangatsanganana no loharanon'ny fahatsiarovana ankamamin'izy ireo indrindra.
Manodidina ny efatra amin'ny dimy (78 isan-jato) amin'ireo kanadiana no nilaza fa miverina amin'ny laoniny ny raharaha, ny dia iraisam-pirenena no iray andrasan'izy ireo indrindra.
Maherin'ny antsasaky ny kanadiana - 55 isan-jato - no nilaza fa maniry bebe kokoa ny hanao dia iraisam-pirenena noho ny teo aloha.
Latsaky ny ampahefatry ny kanadiana - 24 isan-jato - no nilaza fa mikasa ny hanao dia iraisam-pirenena izy ireo ao anatin'ny enim-bolana ho avy.
Navoaka androany ny valin'ny fanadihadiana indostrialy farany izay manome fanazavana momba ny fomba fijerin'ireo mpandeha iraisam-pirenena kanadiana.
Hita tamin'ny fikarohana fa na ny ankamaroan'ny Kanadiana manao dia lavitra (58 isan-jato) dia miambina hatrany ny amin'ny fitsangatsanganana any ivelany noho ny fiakaran'ny Delta COVID-19, ary tsy latsaky ny telovolana ny drafitra hitetezana iraisam-pirenena ao anatin'ny enim-bolana ho avy, mihoatra ny roa ampahatelony (78 isan-jato) no milaza fa ny dia iraisam-pirenena dia iray amin'ireo zavatra andrasan'izy ireo indrindra rehefa mihombo ny areti-mandringana.
Ny fanadihadiana ihany koa dia nanambara fa ny mponina ao Kanada misalasala kokoa mankany fitsangatsanganana iraisam-pirenena raha oharina amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy atsimo, miaraka amin'ny 42 isanjaton'ny Amerikanina mikasa ny hitsangatsangana any ivelany ao anatin'ny enim-bolana manaraka, raha 24 isanjaton'ny Kanadiana ihany.
Noho ny fetran'ny vokatra azo amin'ny fivezivezena, mihoatra ny antsasaky ny 55 isan-jaton'ny Kanadiana izao no mitatitra ny faniriany mafy ny hahita an'izao tontolo izao noho ny teo aloha.
Ny valiny lehibe indrindra momba ny zavatra tsy hita indrindra momba ny dia iraisam-pirenena dia ny fahitana fahitana vaovao (56 isan-jato), fanandramana tontolo vaovao (53 isan-jato), fampifandraisana sy fialan-tsasatra (53 isan-jato), ary fianarana momba ny kolontsaina samihafa (52 isan-jato).
Ny 87 isan-jaton'ny Kanadiana dia manaiky fa ny fitsangatsanganana iraisampirenena dia nanome azy ireo ny sasany amin'ireo fitadidiana fiainany ankafiziny indrindra.